rafitra fanamafisana indraoka ho an'ny famonoana, fampidirana an-tsokosoko, fanalefahana, fisokafana
Home / fampakarana hafanam-be / rafitra fanamafisana indraoka
Sokajy: fampakarana hafanam-be, induction brazing machine, Induction Hardening Machine, Induction Power Supply, Fiatoana fanasan-drivotra mahazatra Tags: indraindray, IGBT rafitra fanamafisana ny indostria, induction brazing heater, Induction Brazing Machine, milina fanadinoana fanosotra, mpanamboatra induction, fitaovana fanamainana induction, Induction Fanamboarana fitaovana, Induction Heating Machine, rafitra fanamorana ny induction, milina fanalefahana induction, magnetic induction heater, rafitry ny famerenana amin'ny laoniny
Rafitra fanamafisana indraoka magnetika IGBT
endrika sy habe samihafa amin'ny Indonezianina fanalefahana azo ovaina mora foana mba hafanana faritra samihafa.
1. Fanafanana (hosoka mafana, famafana ary fanamainana mafana)
Induction fanaovana hosoka mafana mikendry ny hamolavola ny sangan'asa amin'ny mari-pana sasany (ny fitaovana samihafa dia mila mari-pana isan-karazany) amin'ny endrika hafa amin'ny alàlan'ny fametahana gazety miaraka amin'ny fanampian'ny punch press, milina fanoratana na fitaovana hafa, ho an'ny tranga, extrusion mafana amin'ny raharaha famantaranandro, flan watch, tantanana, bobongolo kojakoja, lakozia sy latabatra entana, ware zavakanto, ampahany mahazatra, fastener, ampahany mekanika namboarina, hidy varahina, rivet, vy vy ary pin.
Ny famafana mafana dia manondro ny fifandraisan'ny metaly na metaly samihafa amin'ny metaly amin'ny alàlan'ny fanamainana mifototra amin'ny fitsipiky ny fanitarana mafana na fandoroana mafana, ho an'ny tranga, fantsom-bozaka vita amin'ny vatan'ny vatan'ny radiatoran'ny solosaina miaraka amin'ny takelaka aluminium sy tranokala mpandefa, vy sy plastika fantsona, famehezana ny foil aluminium (peel nify nify), rotor moto ary fanamafisana ny singa fanafanana herinaratra tubular.
Ny fandrendrehana dia mikendry indrindra ny handrendrika ilay metaly ho lasa rano amin'ny alàlan'ny fampiasana hafanana avo, izay azo ampiharina indrindra amin'ny fandefasana vy, vy, varahina, aliminioma, zinc ary koa ireo metaly ambony isan-karazany.
2. Fitsaboana hafanana (famonoana tany)
Ny famonoana fitaovana ho an'ny fitaovana sy fitaovana isan-karazany, toy ny plier, wrench, marmara, famaky, fitaovana fikosoham-bary ary fitetezana (shear orchard).
Ny famonoana ho an'ny fiara sy moto isan-karazany, toy ny crankshaft, tsorakazo mampifandray, paingotra piston, kodiarana rojo, kodiarana aliminioma, valizy, vatan-tsandrin'ny vatolampy, zana-kazo kely, zana-kazo kely sy fork.
Fandroahana fitaovana ho an'ny milina, toy ny lathe deck sy ny rail rail.
Ny famonoana ho an'ny faritra vy sy fitaovana milina isan-karazany, toy ny hazo, kodiarana (kodiarana rojo), cam, chuck ary clamp sns.
Quench ho an'ny bobongolo fitaovana, toy ny bobongolo kely, kojakoja amam-bika ary lavaka bobongolo ao anaty.
3.Welding (welding vy, soldering volafotsy ary famonoana)
Fanamafisana ireo fitaovana fanapahana fitaovana isan-karazany, toy ny fitaovana diamondra, fitaovana fanosotra, fitaovana fandavahana, fantsom-boaloboka, fantsom-bozaka matevina, fanapahana fikosoham-bary, reamer, fitaovana fandaminana ary bitika afovoany.
Fametahana fitaovana elektronika isan-karazany: soldering volafotsy sy induction brazing metaly mitovy karazana na karazany samy hafa, toy ny kabine fidiovana sy ny vokatra ao an-dakozia, ny fampangatsiahana varahina, ny fanaingoana ny jiro, ny fametahana ny bobongolo, ny fikirakirana ny fitaovana, ny atody, ny vy ary vy, vy sy varahina ary koa varahina sy varahina.
Ny fantsom-bozaka ambany potika dia mihatra indrindra amin'ny fametahana kodiarana boribory, toradroa ary koa ny vilany tanety tsotra tsy ara-dalàna. Izy io koa dia azo ampiharina amin'ny fantsom-boasary tsotra amin'ny metaly hafa.
Ny fametahana ny kapila fanamafisam-peo amin'ny kettle rano mafana amin'ny herinaratra dia manondro ny fantsom-bozaka vy tsy misy fotony, ny takelaka vita amin'ny aliminioma ary ireo fitaovana fanamafisam-peo elektrika misy endrika maro samihafa.
3.Annealing (tempering sy modulation)
Fametahana ireo vokatra vita amin'ny vy tsy misy fangarony, toy ny koveta vy tsy misy fangarony, kapoaka annealed sy extruded, sisin'ny mivalona annealed, fantsom-baravarankely, fantsom-by tsy misy fangarony, lakozia sy kaopy.
Famaritana karazana asa vy hafa, toy ny lohan'n golf golf, cue, hidy varahina, fametahana varahina fitaovana, fitoeran-antsy an-dakozia, savony, vilia aluminium, paill aluminium, radiator aluminium ary vokatra aluminium maro karazana.
Fivadihana matetika fanasitranana electromagnetic na ny fanamafisana induction ho fohy dia fomba iray hanafoanana ireo fitaovana vy amin'ny alàlan'ny fanovana ny herinaratra mandeha amin'ny herinaratra ho lasa faritra voafaritra mifototra amin'ny fitsipiky ny fampidirana elektromagnetika. Izy io dia mihatra indrindra amin'ny fiasan'ny vy, ny fitsaboana amin'ny hafanana, ny welding ary ny fiempoana. Ity karazana teknikan'ny fanafanana ity dia azo ampiharina amin'ny indostrian'ny famonosana (toy ny famehezana ny foil aluminium ampiasaina amin'ny indostrian'ny fanafody sy ny sakafo), ny fitaovana semiconductor (toy ny silikonin'ny monocrystalline extruded ary ny metaly mafana mifatotra ho an'ny vera fiara).
Fototry ny rafitra fanamafisana induction ampidiro ny coil fampidirana, loharanom-pahefana AC ary ny sangan'asa. Ny coil induction dia azo amboarina amin'ny endriny samihafa toy ny isan-karazany ny zavatra nohafanaina. Ny coil dia mifandray amin'ny loharanom-pahefana manome arus hafa ho an'ny coil. Ny onjam-pifandimbiasan'ny coil dia afaka mamorona sahan'andriamby mifandimby mandalo ireo sangan'asa mba hamoahana ny fikorianan'ny eddy araky ny fanamaintanana.
Ny tombony amin'ny rafitra fanamafisana manetic induction
Fanafana haingana: ny taha farafahakeliny amin'ny hafanana dia latsaky ny 1 segondra (misy ny tahan'ny fanafanana ho fanitsiana sy fifehezana).
Fanaparitahana malalaka ny fanafanana: azo ampiasaina izy io mba hanafanana ireo faritra vy isan-karazany (soloina ny coil induction azo esorina toy ny isam-pahefana miasa).
Easy fametrahana: azo ampiasaina raha vao mifandray amin'ny loharano herinaratra, coil fampidirana ary koa fantsona famatsian-drano sy fantsom-pisondrotana; kely ny habeny ary maivana ny lanjany.
Asa sarotra: azonao atao ny mianatra mampiasa azy ao anatin'ny minitra maromaro.
Fanombohana haingana: azo atao ny manomboka manao asa fanafanana raha toa ka misy rano sy famatsian-herinaratra.
Meny fitetezana: Raha ampitahaina amin'ny fitaovana fantsom-panafangaro mahazatra matetika dia afaka mamonjy herinaratra manodidina ny 70%. Ny kely kokoa amin'ny haben'ny sanganasa dia ny fihenan'ny herinaratra ambany kokoa.
Fahombiazana avo lenta:izy io dia manana endrika toy ny fanamainana fanamiana (azo ampiharina mba hanitsiana ny elanelan'ny coil fampidirana mba hiantohana ny mari-pana mety araka ny takian'ny faritra tsirairay amin'ny sangan'asa), ny fiakaran'ny hafanana ary ny faravodilan'ny oksika voafetra, ary afaka miambina amin'ny fako aorian'ny fanaovana annealing.
Fiarovana feno:Izy io dia manana asa toy ny fanamafisam-peo mahery vaika, over-current, overheat ary tsy fahampian'ny rano ary koa ny fifehezana sy fiarovana azy io.
Temperature azo fehezina: azo ampiharina hifehezana ny mari-pana ho an'ireo sangan'asa fanamafisana arakaraka ny fotoanan'ny fanafanana mialoha, ary amin'izany hifehezana ny hafanan'ny fanafanana amin'ny fotoana teknika iray.
Famolavolana entana feno feno: afaka miasa maharitra mandritra ny 24 ora izy io.
Lanja kely sy lanja maivana: kilao am-polony maro fotsiny ny lanjany, izay ny habaka amin'ny gorodona voafetra dia afaka mamonjy amin'ny fomba mahomby ny sehatry ny atrikasa.
Fanesorana ny herinaratra avo: tsy mila mpanova miampy izay mety hamokatra herinaratra manodidina ny iray alina, ary amin'izany dia azo antoka ny fiarovana azo antoka.